Ee e, onye nkuzi onye agha merụrụ na Bafoussam anwụghị - teles relay
Ee e, onye nkuzi onye agha merụrụ na Bafoussam anwụghị
Ee e, ọ bụghị ndị Cameroonians atọ merụrụ site na…
Mba, Cameroon agaghị emechi ókèala ya ...
Mahadum nke Yaoundé m hiwere diplọma nke mba…
Ozi na-ekesa na netwọk mmekọrịta na Cameroon na-egosi na onye agha tiri nne onye nkụzi akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ọha "Garage Militaire" na Bafoussam, n'ihi na onye nke ikpeazụ nyere nwa ya nwoke ahụhụ maka emeghị ihe omume ụlọ. Mgbe nyochachara, nyochapụtara ozi ahụ. Mana dị ka ụfọdụ ederede na web, onye nkuzi Ce2 nwụrụ mgbe ọ nabatara ụlọ ọgwụ mpaghara. Anyị enyochaara gị. Azịza ya bụ: -abụghị
Eziokwu ahụ mere obere oge tupu elekere 9 nke ụtụtụ na Tọzdee, Septemba 19, 2019. Louisette Teualen, onye nkuzi na klas nke Elementary Course n'afọ nke abụọ (Ce2) na ụlọ akwụkwọ ọha na eze nke "Garage Militaire" na Bafoussam, nwoke ahụ nyefere ya ọrụ. ekike. Ndị ọrụ ibe onye nkuzi ahụ kwuru na onye agha bịara na nwunye ya. Nke ikpeazụ nọgidere n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Mgbe onye agha ahụ merisịrị onye nche ahụ, o wee banye ọkwa nke mbụ nke ụlọ ụlọ klas nke Ce2.
"Ọ kụrụ isi ya na mgbidi"
"Ọ gwara nne ya nwanyị na - asị: 'Madame, bịa' '. Mgbe ahụ, o jidere ya site na ntutu isi, gbuo ya ọtụtụ ugboro, tie ya isi na mgbidi, wee jiri aka ya kechie akpịrị ya. N'ịbụ onye ọchị, onye nkuzi ahụ dara ma gafere, "Christiane Likound, odeakwụkwọ ukwu nke National Independent Basic Education Union (Snieb) na-akọ, na-egosipụta ọfụma nke ukwuu.
Na vidiyo na-agafe na ntanetị, anyị hụrụ onye nkuzi tọgbọrọ n'ala mgbe mwakpo ahụ. Ọ na-ata ahụhụ. Ndị ọrụ ibe ya gbara ya gburugburu na-achọ itinye enyemaka enyemaka mbụ aka.
Site n'olu dara ụda
nke ụmụ akwụkwọ ahụ, onye nkuzi agbataobi bịarịrị nso ịjụ banyere ọnọdụ ahụ.
A na-akụ ya ihe. Anne Kadji, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ, jidere ya
Nwoke ahu yi uwe agha gha aghaghachie uko elu.
Ọ gara gendarmerie ozugbo. Ma akpọre ya ngwa ngwa. Louisette
Achọrọ ka Teualen, onye nkụzi Ce2 ahụ ji ọgụ na-eme ihe
ụlọ ọgwụ. Nwanyị ahụ na-eme ihe ọjọọ na-abanye n'ụlọ ime ụlọ ọgwụ mberede
Ibịghike enye ama
nnabata ihe akụkọ na weebụ gosipụtara ọnwụ ya.
Ee e, onye nkụzi ahụ adaghị mbà. "Onye nwe ya hapụrụ ụlọ ọgwụ
ụnyaahụ (Friday) na elekere isii nke ehihie. Ahụ adịchaghị ya mma, mana ọ na-ekwu okwu. A bụ m
ugbu a n'ụlọ. Ọ ga-enwerịrị nyocha CT na Mọnde n'ihi na kụrụ ya n'isi
megide mgbidi, "onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ, nke Stopintox kwuru
Satọdee Septemba 21, n’elekere 11:01 nke ụtụtụ. Di Louisette Teualen na di ya abụọ
childrenmụaka, ha niile sitere na ọrụ ahụike, na-elekọta ọnọdụ ya ka ha na-eche Jehova
Ekpesara n'ụtụtụ Mọnde a, di nwanyị ahụ kwuru na ya 'adịchaghị mma'. O kwuru na ọ na-atụ ụjọ nke ukwuu maka ihe ndị agha ahụ mere.
"Na ọ na-arịa ọrịa abụghị nsogbu. Abụ m dọkịta. Enwere m ike ijikwa. Mana ihe karịrị m ma na-ewute m karịa ọrịa ahụ, karịa ihe ọ bụla, bụ eziokwu bụ na mmadụ na-aga idobe nwunye m n'ọnụ ụlọ klas ya, n'ihu ụmụ akwụkwọ ya. O ji olu dara ụda kwuo hoo haa m.
Mgbe a jụrụ ya ma ọ gbara akwụkwọ mkpesa, di onye nkụzi ahụ zaghachiri n'ụzọ na-adịghị mma. "Enweghị m ike ịga n'ụlọ ikpe. Ma anaghị m egbochi ndị ọzọ ịchụso ya ịgbachitere ndị nkuzi ndị ọzọ ”.
Na Snieb, anyị na-egosi
na koneelu nke 6Eme Battalion kwuru na ndị agha enweghị atụ
atọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ. "Ndị otu ahụ edewo akwụkwọ ozi enyemaka
kpọgara Gọvanọ nke mpaghara Western mpaghara iji nye iwu mmachi
weere ya, ”ka Christiane Likound na-ekwu. Onye kwuru na onye agha bụ
omenaala nke eziokwu. N'afọ gara aga, ọ wakporo onye nkuzi ọzọ
nkezi afọ abụọ (Cm2) n'otu ụlọ akwụkwọ, n'okpuru otu ọnọdụ.
isiokwu a pụtara na mbụ na https://stopintox.cm/2019/09/23/non-lenseignante-bastonnee-par-un-militaire-a-bafoussam-nest-pas-morte/
Lesotho: Prime Minista hapụrụ South Africa n'isi ikpe igbu ọchụ - Jeune Afrique
Enyemaka maka ndị nnyemaaka nke asụsụ abụọ
Mba, enwebeghị ndị Camerooni oria atọ na China na China
Mba, Cameroon agaghị emechi ókèala ya kpamkpam n'ihi ntuli aka…
Mahadum nke Yaoundé nke m weputara diplọma nke mba ụwa na endoscopic ịwa ahụ…
onye noose na-emechi anya ihe ruru mmadụ 8766 na anọghị oge